येशूले आन्तरिक शुद्धताको बारे सिकाउनुहुन्छ - सत्य वेद पुुस्तकहरू
05/10/2020 26/10/2020 Ragnar
धार्मिक अनुष्ठान सम्बन्धी शुद्ध हुनु कत्तिको आवश्यक छ ? शुद्धता कायम गर्न र अशुद्धता बाट बच्न के गर्नु पर्छ ? हामी मध्य धेरैले अशुद्धताका विभिन्न रुपहरुबाट बच्न वा न्यून गर्न कडा परिश्रम गर्दछौ , जस्तै छुआछूत र मानिसहरु एक अर्का बीचको पारस्परिक स्पर्श जसले अशुद्धता एकबाट अर्कोमा सार्छन । धेरै मानिसहरु अशुद्ध भोजन खानबाट बच्दछन् , खाना तयार गर्नेको अशुद्धताको कारण जहाँ हामीले खाने खानामा एक प्रकारको अशुद्धता उत्पन्न हुन्छ ।
धर्महरुले शुद्धता कायम गर्दै
जब तपाई यसमा चिन्तन गर्नुहुन्छ ,हामी उचित तरीकाले नियमहरु पालन गर्न धेरै प्रयास गर्न सक्छौ । बच्चाको जन्म पछि , आमाले सुतक सम्बन्धी निर्धारित नियमहरुको पालन गर्नुपर्छ , जसमा लामो समय अवधिको लागि सामाजिक दुरी समावेश हुन्छ । जन्म पछि जच्चा ( नयाँ आमा ) लाई केहि परम्परामा एक महिना भन्दा बढी अशुद्ध मानिन्छ । नुहाउने र मालिश गर्ने एक शुद्धिकरण प्रक्रिया ( छठी ) मार्फत मात्र आमालाई फेरि स्वच्छ मानिन्छ । जन्म बाहेक, महिलाको मासिक धर्म अवधि सामान्य रुपमा उनी अशुद्ध बनिएको रुपमा देखिन्छ त्यसैले उनीले अनुष्ठान शुद्धिकरण बाट पुन शुद्धता पाउँनुपर्छ । विवाह गर्नु अघि वा अग्नि भेटी (होम वा यज्ञ) अघि, धेरै मानिसहरुले शुद्धता कायम गर्नको लागि अनुष्ठान विधिद्धारा शुद्धिकरण गर्छन् जसलाई पुण्यवचनम् भनिन्छ , जहाँ मन्त्रहरु उच्चारण गरिन्छ र मानिसहरु माथि पानी छर्किन्छ ।
चाहे हामीले खाने खाना होस् ,वा जुन चीजहरु वा मानिसहरु जसलाई हामी स्र्पश गर्छौ, वा हाम्रो शारीरिक गतिविधिहरु , हामी अशुद्ध हुने थुप्रै तरिकाहरु छन् । त्यसकारण धेरैले शुद्धता कायम गर्न कडा परिश्रम गर्छन् । यसै कारणले गर्दा जीवनमा सहि तरीकाले प्रगति गर्नको लागि संस्कार (या प्रथा )को रुपमा शुद्धता सम्बन्धी अनुष्ठान संस्कार दिइयो ।
गौतम धर्म सुत्र
गौतम धर्मसुत्र सबैभन्दा पुरानो संस्कृत धर्मसुत्रहरु मध्य एक हो । यसले ४० बाहिरी संस्कारहरु सुचीबद्ध गर्छ (जस्तै जन्म पछि अनुष्ठान सम्बन्धी सफाई) तर आठ आन्तरिक संस्कारहरुलाई पनि हामीले शुद्धता कायम राख्न अभ्यास गर्नुपर्दछ । तिनीहरु हुन् :
सबै प्राणीहरुप्रति करुणा, धैर्य, ईर्ष्याको कमी, पवित्रता, शान्ति, एक सकारात्मक स्वभाव, उदारता र सहनशीलता ।
सबै प्राणीहरूप्रति अनुकम्पा, धैर्यता, ईर्ष्याको अभाव, शुद्धता, शान्ति, एक सकारात्मक स्वभाव, उदारता, र अधिकारको कमी।
गौतम धर्म—सुत्र ८:२३
येशू शुद्धता र अशुद्धतामा
हामीले देख्यौ कि कसरी येशूका शब्दहरुमा अधिकार सहितको सिकाई , मानिसहरुलाई चंगाई गर्न र प्रकृतिलाई आदेश दिन सक्ने शक्ति थियो । येशुले हामीलाई बाहिरी मात्र होईन हाम्रो भित्री शुद्धता बारेमा सोच्नको लागि बोल्नुभयो । यद्यपि हामीले अरु मानिसहरुको बाहिरी सफाइ मात्र देख्न सक्छौ , परमेश्वरको लागि यो कुरा फरक छ—उहाँले भित्र पनि देख्नुहुन्छ । जब इस्राएलका कुनै एक राजाले बाहिरी शुद्धतालाई कायम गरीरहे तर भित्री हृदयलाई सफा राखेनन् , उनका गुरुले बाइबलमा लेखिएको यो सन्देशलाई ल्याउनु भयो ।
२ इतिहास १६:९अ
आन्तरिक सफाइ हाम्रो ‘हृदयहरु’ सँग सम्बन्धित छ —तपाई जे सोच्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ, निर्णय लिनुहुन्छ, समर्पण गर्नुहुन्छ वा अनाज्ञाकारी हुनुहुन्छ र जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ । केवल आन्तरिक शुद्धता संग हाम्रो संस्कार प्रभावकारी हुन्छ । यसैले येशूले आफ्नो शिक्षामा बाहिरी शुद्धताको तुलना आन्तरिक संग गर्दै आन्तरिक शुद्धता लाई जोड दिनुभयो । यहाँ आन्तरिक अर्थात भित्री शुद्धता सम्बन्धी उहाको शिक्षाको सुसमाचारको अभिलेख यसरी छ :
37 येशू बोली सक्नु भएपछि, एकजना फरिसीले संगै खाना खानु भनी आग्रह गरे। अनि येशू जानु भयो अनि खान बस्नु भयो।
38 तर खाना खानु भन्दा अघि येशूले हात नधोएको देखेर फरिसी छक्क परे।
39 यसमा प्रभूले भन्नु भुयो, “तिमी फरसीहरू खाली कचौरा अनि थालको बाहिरा पट्टि मात्र धुन्छौ तर भिन्न चाँहि तिमीहरू लोभ औ दुष्टताले भरिएका छौ।
40 तिमीहरू मूर्ख हौ। जसले बाहिरी भाग बनाए उनैले भित्री भाग पनि बनाए। हो कि होइन?
41 तर भित्रपट्टि जो जे छ त्यो गरीब मानसहरूलाई देऊ। त्यसपछि तिमी पनि पूर्णरूपले सफा हुनेछौ।
42 धिक्कार तिमी फरिसीहरूलाई! तिमीहरूकोमा भएको पुदिना, आरूद अनि बगैंचामा भएका अन्य जम्मै चीजहरूको दशांश परमेश्वरलाई चढाउँछौ, तर तीमीहरू परमेश्वर प्रति न्याया र प्रेम अवहेलना गर्छौ। यही कुराहरू तिमीहरूले गर्नु पर्ने हो जब तिमीहरू अन्य कामहरू गरिरहेका हुन्छौ।
43 धिक्कार तिमा फरिसीहरूलाई तिमी सभा -घरमाहरूमा मुख्य-मुख्य आसनहरू मात्र चाहान्छौ। त्यसरीनै बजाहरूमा जाँदा मानसहरूले तिमीहरूलाई आदर गरून् भन्ने चाहन्छौ।
44 धिक्कार छ तिमी फारसीहरूलाई किनकि तिमीहरू कसैबाट पनि याद नहूने चिहानहरू जस्ता छौ। मानसहरू नजानिकन त्यहीमाथि भएर हिडेछन्।
52 “धिक्कार तिमी व्यसथाका शास्त्रीहरू! परमेश्वरको ज्ञानको कुराहरूको चाबी तिमीहरूले लगेका छौ। तिमीहरू आफैले सिकेनौ, अनि अरूहरूलाई सिक्नु पनि वाधा गर्यौ।”
(‘फरिसीहरु’ यहूदी शिक्षक थिए , जसरी स्वामीहरु वा पंडितहरु थिए । येशुले परमेश्वरलाई ‘दशांश’ दिने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । यो धार्मिक भिक्षा दिनु जस्तै थियो )
यहूदी व्यवस्थामा एक मृत शरीरलाई छुनु भनेको अशुद्धता थियो । जब येशूले भन्नुभयो तिनीहरु ‘अज्ञात चिहानहरु’ माथि हिड्छन् , उहाँको मतलब यो थियो कि तिनीहरु जाने बिना अशुद्ध थिए किनकि तिनीहरुले आन्तरिक शुद्धतालाई वेवास्ता गरिरहेका थिए । भित्री शुद्धताको बेवास्ताले हामीलाई मृत शरीरलाई छुने जस्तै अशुद्ध बनाँउछ ।
हृदयले धार्मिक रुपमा शुद्ध व्यक्तिलाई अशुद्ध पार्छ
निम्न शिक्षामा , येशूले ७५० ईसा पुर्व मा अगमवक्ता यशैयाको उदाहरणबाट उद्धृत गर्नुभयो ।
ऐतिहासिक समय—सिमामा ऋषि यशैया र अन्य हिब्रू ऋषि (अगमवक्ता)
सपछि केही फरिसीहरू र शास्त्रीहरू येशूकहाँ आए। तिनीहरू यरूशलेमबाट आएका थिए तिनीहरूले भने,
हाम्रो हृदयबाट आउने कुराले नै हामीलाई अशुद्ध बनाउँदछ । येशुको अशुद्ध विचारहरुको सुची र गौतम धर्मसुत्रका शुद्ध विचारहरुको बिपरितको सुची उस्तै छन् । यसरी तिनीहरुले एउटै सिकाउँदछन् ।
जुनसुकै कचौराबाट तपाई पिउनुहुन्छ , तपाई त्यो केवल बाहिरबाट मात्र नभई भित्रबाट पनि सफा भएको चाहनुहुन्छ । हामी यस दृष्टान्तमा कचौरा हौ । परमेश्वरले हामीलाई बाहिरबाट मात्रै नभई भित्रबाट पनि सफा गरेको चाहनुहुन्छ ।
येशूले हामी सबैले देखेको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ । बाहिरी सफाइ गर्नु धार्मिक विधिहरुमा सामान्य कुरा हुन सक्छ तर अझै पनि धेरै मानिसहरु लोभ र लालचले भरिएका छन् —उनीहरु पनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट महत्वपुर्ण हुन्छन् । भित्री सफाइ प्राप्त गर्न आवश्यक छ —तर यो धेरै गाह्रो छ ।
येशूले गौतम धर्मसुत्र जस्तै धेरै शिक्षा सिकाउनुभयो जसले आठ भित्री संस्कारहरुको सुचीबद्ध गरेपछि यो बताउँदछ :
एक व्यक्ति जसले चालीस संस्कारहरु पुरा गरेको छ तर यी आठ सद्गुणहरुको कमी छ भने त्यो व्यक्ति ब्रहामणसँग मिल्दैन ।
अर्कोतर्फ एक व्यक्ति जसले चालीस संस्कारहरु मध्य केहि संस्कारहरु मात्र पुरा गरेको छ तर यी आठ सद्गुणहरु छन् भने उ ब्रहामणसँग मिल्ने कुरा निश्चित छ ।
त्यसैले मुद्दा उठेको छ । हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ती कसरी हृदय सफा राख्ने —ब्रहामणसँग कसरी मिल्ने ? हामी सुसमाचारको माध्यमबाट द्धिजको बारेमा जान्न जारी राख्छौ ।
असुद्धता, गौतम धर्मसूत्र, धर्मसूत्र, संस्कार